Tsy fantatry ny mpitsangatsangana Japoney ve ny Coronavirus?
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Tsy fantatry ny mpitsangatsangana Japoney ve ny Coronavirus?
Lehilahy japoney iray no nanaporofo fa voan'ny aretina coronavirus (COVID-19) fotoana fohy taorian'ny niverenany avy tany amin'ny fitsidihana tany Indonezia, hoy ny mpampahalala vaovao japoney NHK.
Fanindroany izao ny mpitsidika niverina avy any Indonezia nankany Japon ary voan'ny Coronavirus. Alohan'ny hiverenan'ny sinoa iray ary voan'ny virus.
Raha ny filazan'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana sy ny manampahefana Indoneziana dia tsy misy virus any Indonezia. Ilay toerana fizahan-tany malaza any Bali dia tsy nisy trangana virus coronavirus. Vintana tsara ve izany sa fitsapana ratsy? Fanontaniana iray io nanontany tamin'ny herinandro lasa teo ny Foreign Policy News.
Ny mpitsidika japoney iray izay niverina avy tany Hawaii, Etazonia nankany Japon herinandro lasa izay dia voan'ny virus ihany koa ary afaka amin'ny COVID-19 i Hawaii hoy ny tompon'andraikitra misahana ny fahasalamana ao Hawaii. Hatramin'ny nitomboan'ny vanim-potoana hampielezana ny virus dia 2 ka hatramin'ny 4 herinandro ny mpandeha toa ity mpizahatany japoney ity ary mpizahatany hafa avy any Korea atsimo izay nitsidika an'i Israel vao tsy ela akory izay, mety hiparitaka ilay virus raha tsy fantany.
Araka ny tatitra nataon'ny NHK, ny governemanta metropolitan Tokyo dia nanambara tamin'ny sabotsy fa ilay lehilahy, mponina ao Tokyo 60 taona, dia voan'ny virus coronavirus.
Ilay lehilahy, mpiasa iray ao amin'ny toeram-pitsaboana zokiolona, ​​dia nitsidika toeram-pitsaboana iray tamin'ny 12 feb. Taorian'ny nahazoany "soritr'aretina toy ny hatsiaka", nefa niverina nody izy tamin'io andro io ihany satria tsy voan'ny pnemonia izy. Niverina niasa tao amin'ny trano zokiolona izy tamin'ny 13 feb. Nandany ny 14 feboko tany an-trano izy ary avy eo dia nilaza fa nankany Indonezia tamin'ny fialantsasatry ny fianakaviana tamin'ny 15 feb.
Ny tatitra NHK dia tsy nilaza ny tena toerana nalehan'ny lehilahy tany Indonezia.
Nentina tany amin'ny hopitaly ilay lehilahy rehefa niverina tany Japon tamin'ny 19 feb. Noho ny fahasahiranana mafy niainany, ary voalaza fa "salama saina" izy.
Fampahalalam-baovao iray avy amin'ny Ivotoerana fanaraha-maso ny aretina Novel Coronavirus ao Tokyo ao amin'ny tranokalan'ny governemanta metropolitan ao Tokyo no nanambara fa nisy mponina Tokyo manodidina ny faha-60 taonany nanamarina fa voan'io aretina io ary ny fiandohan'ny soritr'aretiny dia nitranga tamin'ny 12 feb.
Ny famotsorana anefa dia tsy miresaka tantaram-pitaterana any Indonezia, ary nilaza fotsiny fa tsy nanana tantaram-pitetezana tany Chine io lehilahy io tao anatin'ny 14 andro talohan'ny nanombohan'ny soritr'aretina. Ny aretin'ilay marary dia voatanisa ho "matotra".
Kanada mankalaza ny Andron'ny fiaramanidina
Fanairana ny departemantam-panjakana amerikana ho an'i Japon sy ny Repoblikan'i Korea amin'ny valan'ny COVID-19